सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आकर्षण बढेको छ - Karobar National Economic Daily
query_builderJuly 12, 2017 2:14 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility348
अनिलकुमार ठाकुर महानिर्देशक केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग
प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा विभागको संरचना कस्तो रहनेछ ?
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग राज्यको आवश्यकताको विभाग हो । यसको संरचना कसरी बनाउने भन्ने राज्यको संरचना कसरी बन्छ÷बनाइन्छ भन्नेमा भर गर्छ । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहेको यो विभाग संघीयता कार्यान्वयनसँगै हुने राज्यको प्रशासनिक संरचनामा केन्द्रीय स्तरकै हैसियतमा काम गर्ने गरी रहन्छ ।
केन्द्रबाट यस विभागले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि प्राप्त गरेको बजेट स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी जान्छ । विभागले केन्द्रबाट नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्छ ।
विभागले चार दशक पुराना ऐन–नियमका भरमा पञ्जीकरणजस्तो अति महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । यसलाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन कहिले ल्याउनुहुन्छ ?
हामीले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ र नियमावली, २०३४ का आधारमा काम गर्दै आएका छौं । यी ऐन, नियमावली पनि २०४७ सालपछि मात्रै पूर्ण रूपमा लागू भएका थिए । तपार्इंले भनेजस्तै ऐन, नियमावली बनेको निकै लामो समय भइसकेको छ ।
यही ऐनका आधारमा विभिन्न निर्णय, परिपत्र जारी गरी तत्कालीन व्यवस्था गर्दै पञ्जीकरणका काम हँुदै आएका भए पनि नयाँ ऐन–नियमको विल्कुलै आवश्यकता भएको छ । ऐन पूर्वाधार त हो तर यसलाई व्याख्या गर्दै विभिन्न परिपत्रले काम चलाइरहेकोमा भविष्यका लागि नयाँ ऐनको वर्क आउट भइरहेको छ । यसैले ऐनको हकमा धेरै काम भएको छ भने नियमावलीको हकमा भने केही काम गर्न बाँकी छ ।
नयाँ संविधान, प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै ऐन, नियम नयाँ आउनुपर्छ । यति मात्र होइन, पञ्जीकरणजस्ता महत्वपूर्ण घटना दर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा हामी दृढताका साथ लागिरहेका छौं ।
पञ्जीकरणको कामप्रति अझै पनि जनचेतनाको कमी देखिएको हो ?
पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६४ प्रतिशत नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराएको पाइन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो तथ्यांक लिने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले पक्कै पनि १० वर्षअघिको तुलनामा व्यक्तिगत घटना दर्ता संख्या बढेको छ । खासगरी हाम्रोमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको कानुन फितलो छ । जहिले दर्ता गरे पनि पनि हुने ठानिन्छ, तर त्यस्तो हँुदै होइन ।
जबसम्म कानुन बाध्यकारी हँुदैन तबसम्म घटना भएपछि त्यसलाई कानुनी रूपमा दर्ता गराउने भन्नेमा पनि कमी देखिन्छ । नागरिकता प्राप्त गर्न पनि यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । विद्यालय भर्ना गर्न त जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नै चाहिने भैसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नागरिकमा आकर्षण भने बढेको छ ।
सामाजिक सुुरक्षा भत्ता लिन पनि पञ्जीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । अन्य सरकारी सेवा सुविधा लिन पनि व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनिवार्य बनाउन सके यसप्रतिको नागरिकको चेतना अभिवृद्धि हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले घटना दर्ता गराउने खालका चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ । यस वर्ष वैशाखमा घटना दर्ता सप्ताह नै मनाएका पनि थियौं ।
तपाईंहरूको डेटाबेस निकै कमजोर छ भनिन्छ नि ?
हो, अहिलेसम्मको काम ¥यान्डममा नै भइरहेको छ । तपार्इंले भनेजस्तै डेटाबेस र फ्याक्ट बेसमा काम भएको छैन । यो बस्तीमा यति मान्छे बस्छन्, यतिले सुविधा पाए भनेर अभिलेख राख्ने काममा कमी–कमजोरी छन् । अब प्रविधिको विकास भएसँगै यी काम पक्कै पनि बदलिनेछन् ।
विगतमा गाविस सचिवबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरियो भन्ने पटक–पटक भनियो । बदमास गर्नेलाई कारबाही पनि भयो । स्थानीय तहबाट सही तरिकाले यो बजेट वितरण होला भनेर कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
विगतका कमजोरीहरू नै अब सच्याउनुपर्छ । कतिपय कारबाहीका भागीदार भएका छन् । कतिपयमाथि छानबिन जारी छ । सामाजिक कार्यक्रमको बजेट बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेकोमा चालू आवमा दोब्बर बढेर ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।
विगतमा ह्यान्ड क्यास दिँदा बदमासी भएको भन्ने भएर नै यसलाई निरुत्साहित गर्न हामीले सामाजिक कार्यक्रमको बजेट बैंकमार्फत वितरण गर्ने भनेका हौं । अहिले पनि ४ सयभन्दा बढी स्थानमा बैंकबाट यस्तो भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा देखिएको बदमासी नियन्त्रण गर्न बैंकबाट बितरण गर्नुको विकल्प छैन ।
जहाँसम्म बैंक नपुगको स्थान छ, त्यहाँ पनि क्रमशः पूर्वाधार विकास गर्दै लैजानुपर्छ । यदि अशक्त, दुर्गम, विकटमा नगद दिने हो भने पनि सार्वजनिक सुुनुवाइ गरेर सबैलाई जानकारी गराएर दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको लगतकट्टा पनि समयमै गरिनुपर्छ । यस्तै नवीकरण पनि समयमा होस् । समयमा नवीकरण नगर्दा पटक–पटक अख्तियारी दिनुपरेको छ ।
दोहोरो भत्ता पाउँदैनन् कसैले । पेन्सन पाउनेले यस्तो भत्ता पाउँदैनन् । हामीले यस्तो भत्ता पाउनेको नामनामेसी अनलाइनमा दर्ता पनि गर्दै आएका छौं । यसले पनि कमजोरी हुनबाट रोक्छ । स्थानीय तहका धेरै काम भएकाले अरू कामजस्तै यसलाई पनि उनीहरूले महत्वपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
तर, अहिलेका स्थानीय सरकारका प्रमुख÷अध्यक्षहरूले यो भत्ता बढाउने अनि घरघरै वितरण गर्ने भने । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
मलाई लाग्छ, यस सम्बन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेकाले थप केही भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यक्रम भएकाले यसको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्छ भने कार्यान्वयनचाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छन् ।
यो स्किम पपुलर पनि हो । ठूलो समुदायमा बजेट जान्छ । विभिन्न नौ प्रकारका भत्ता अहिले २३ लाख नागरिकले लिइरहेका छन् । यसैले यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनु हँुदैन ।
आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनु हुँदैन । यसले अन्य विकास निर्माणका काम प्रभावित पार्न सक्छ । उता केही स्थानीय सरकारी अधिकारीले घरघरबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भने पनि हामीले विगतका कमजोरी देखेरै बैंकबाट वितरण गर्ने अभ्यास गरेका हौं । यसैले उहाँहरूले यो कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नु हँुदैन ।
बैंकबाट वितरण गर्दा दुरुपयोग रोकिन्छ । एकातिर बजेट बढेको छ भने अर्कातिर जनशक्ति पनि छैन । यसैले बैंकबाट वितरण गरिनु नै उत्तम हो । पारदर्शिताका लागि पनि बैंकबाटै वितरण हुनुपर्छ । अहिले विभिन्न नौ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बजेट वितरण गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बजेटको स्वरूप फ्रिज भएर जाने भएकाले बैंकमार्फत वितरण गर्दा फ्रिज हँुदैन ।
कसैले व्यवसायजन्य काम गर्छ भने पनि लाभान्वित हुन सक्ला । यसैले बैंकबाट वितरण हुनुपर्छ । तर, दुर्गम, हिमाल र बैंकका शाखा नभएका स्थानमा बिस्तारै ती पूर्वाधार पु¥याउनुपर्छ । ती स्थानमा बैंकमार्फत कसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भनेर हामीले सोमबार पनि राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं । यसका लागि सहजीकरणको प्रयास जारी छ । हामीले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच राखेका छौं ।
नागरिकलाई पञ्जीकरणमा कसरी सहभागी गराउने ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेले समयमा पाए/नपाएको अनुगमन कसरी गर्ने ?
हामीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती पनि जनसभागिता कसरी गराउने भन्ने छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारले आगामी दिनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका हरेक युनिटले अनुगमन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । केन्द्रमा पनि निकै कम जनशक्ति छ ।
विगतमा हामीले पठाएका रकम समयमा नबाँड्ने, बाँडेको पनि समयमा प्रतिवेदन प्राप्त नहुने आदि समस्या रहेकाले अब स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । व्यक्तिगत घटना दर्ता कसरी समयमा गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेले समयमै कसरी पाओस् भन्नेमा ध्यान दिएका छौं । यसलाई हामीले दिगो पनि बनाउनुपर्छ ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । त्यहाँको जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने, तालिम लिने, रिपोर्टिङ तथा प्रविधिमा जोड दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । यसका लागि विश्वमा चलेको प्रचलनलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । सरोकारवालासँग समन्वय गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण स्वयंमा चुनौतीपूर्ण छ । बैंकबाट नगरे पारदर्शिता हुँदैन ।
विभागका नयाँ कार्यक्रम के छन् ?
प्रविधिमैत्री जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामीले स्थानीय तह र विभागको सर्भरमा तथ्यांक प्रविधिमैत्री तवरले राख्नका लागि आवश्यक कदम चाल्दै छौं । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा सर्भिस युनिट बनाउने भनेका छौं ।
यस युनिटले स्थानीय तहमा तथ्यांक इन्ट्री गर्ने, घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने काम गर्छ । यसैगरी नेसनल पपुलेसन रजिस्टर बनाउँदै छौं । जहाँ जनसंख्या, हरेक व्यक्तिको नामनामेसी समावेश गरिन्छ । यी दुवै कार्यका लागि विश्व बैंकले सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षका लागि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक ५÷६ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता पाउने दर बढिरहेको छ । हामीले आगामी आवका लागि चालू आवमा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको तीन जिल्लामा रहेको बाल पोषण भत्ता वितरण गरेकोमा थप तीन जिल्लामा विस्तार गर्दै छौं ।
व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिन्छौं ।
घटना दर्ता व्यापक बनाउँछौं । हाल ४८ जिल्लाका ३८ गाउँपालिका, ९३ नगरपालिका र ५÷५ वटा महा÷उपमहानगरपालिकाका ९ सय २७ वडामा अनलाइन प्रणालीमार्फत यस्ता घटना दर्ता भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा यो संख्या पक्कै पनि बढाउँछौं ।
३२ प्रतिशतमा अनलाइन सुविधा पुगेको छ । स्थानीय तहका जनशक्तिलाई तालिम दिएका छौं । योतर्फ हामी अघि बढेका छौं । स्थानीय तहले पनि यसमा सक्रियता लिएको छ । हामीसँग रहेको १ करोडभन्दा बढी म्यानुअल डाटालाई डिजिटलाइज्ड (प्रविधिमैत्री) बनाउँछौं ।
विकसित देशमा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुँदो रहेछ ? केही अनुभव छ तपाईंसँग ?
उनीहरूको हरेक कुरा पञ्जीकरणबाटै सुरु हुन्छ । सुशासनको आधार नै पञ्जीकरणबाट सुरु हुँदो रहेछ । उनीहरूका अन्य प्रणाली पञ्जीकरणमा आधारित भएर बनाएको पाएको छु । उनीहरूका कानुन पनि सामयिक अद्यावधिक गरिएको देखेको छु ।
उनीहरू प्रविधिमैत्री भएर हरेक काम गर्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्छन् । यसका लागि कार्ड सिस्टम पनि कतिपयले लागू गरेका छन् । सरकारले सीधै उनीहरूको खातामा पनि रकम जम्मा गरिदिँदो रहेछ । तर, यसका लागि प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । हामी पनि विस्तारै यसमा लाग्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण विभाग